Raw Flibanserin HCL powder (147359-76-0) Vaiti - Phcoker
SKU: 147359-76-0 Category: Sex Hormone
Raw Flibanserin HCL powder (147359-76-0) video
Product Name Flibanserin hydrochloride powder
Kemikari Name UNII-96XTC36K1B, 96XTC36K1B
Kirasi yeMishonga Multifunctional serotonin agonist antiagonist (MSAA)
Molecular Wsere 426.8630896
Kunyorera Point > 225 ° C (dec.)
Biological Half-Life 11 maawa
Skukodzera DMSO (Zvishoma), Methanol (Zvishoma)
APane Yakagadzirirwa kurapwa kwekunetseka kwepabonde chirwere chechida pakati pevakadzi.
Raw Flibanserin HCL powder (147359-76-0) Tsanangudzo
Flibanserin hydrochloride ndiyo yekutanga mishonga inobvumidzwa kuti iite chisingaiti chepabonde chishuvo chekuita zvepabonde (HSDD) mumadzimai ekutanga anmenopausal neDFA muna August 2015. Yakatanga kusimbiswa semishonga inopesana nemishonga naBoehringer Ingelheim, asi yakaratidza kusakwanisa kwekuita mumiedzo uye yakawedzerwa mberi seye hypoactive kugadzirisa chirwere chepabonde neSprout Pharmaceuticals. Flibanserin's mechanism of action inonzi inofanirwa nehukama hwakasimba hwe 5-HTA1 uye 5-HTA2 receptors, kuratidza mabasa agonist pa 5-HTA1 uye mupikisi pa 5-HTA2, zvichiita kuti kuderedzwa kwe serotonin muuropi pamwe nemigumisiro pakuwedzera norepinephrine uye dopamine neurotransmitters.
Flibanserin hydrochloride powder (147359-76-0) Mechanism of Action
Flibanserin hydrochloride inoshanda pamatatu emakemikari anokosha anokosha: dopamine, norepinephrine, uye serotonin. Aya makemikari mapurogiramu eurotransmitters. Ivo vane basa rekutumira zviratidzo pakati peuropi uye zvimwe zvikamu zvemuviri kuburikidza nehutano hwemitsipa.
Dopamine uye norepinephrine vanobatanidzwa mune zvepabonde. Zvisinei, serotonin inobatsira kugadzirisa zvepabonde uye inogona kuderedza zvepabonde motokari. Zvinofungidzirwa kuti kana aya makemikari asingakoshi - kana dopamine uye norepinephrin mazinga ari pasi nepakati uye / kana serotonin mazinga akakwirira-mukadzi anganzwa kunzwa zvisingaiti zvepabonde.
Flibanserin hydrochloride inoshanda nekuwedzera mazinga e dopamine uye norepinephrine nekuderedza mazinga e serotonin. Nenzira iyi, makemikari anobatsira kukurudzira chido chepabonde ichiwedzerwa uye chimwe chinogona kudzivisa chido chakaderera.
Kushandiswa kweRaw Flibanserin HCL powder (147359-76-0)
Flibanserin hydrochloride inonzi 5-HT1A agonist uye 5-HT2A anopikisa iyo yakagadzirirwa kurapwa kwechishuvo chepabonde chishuvo chepabonde kune vakadzi (1,2).
Yakakurudzirwa Raw Flibanserin HCL powder (147359-76-0) Dosage
Zvibereko zveFlibanserin hydrochloride powder (147359-76-0)
Zviitiko zvakaipa zvinowanzoonekwa pakati pevakadzi vachitora flibanserin. Zvizhinji zvezviitiko zvinotambudza zvaive zvinyoro kuenzanisa. Zviitiko zvinowanzoshushwa zvinosanganisa zvinosanganisira kuve nechezzinesi, kusuruvara, kunzwa kuneta, kurara, uye kunetseka kurara.
Kunwa doro panguva yeflibanserin kunogona kukonzera kukanganiswa kwepabonde kweropa (kuderera kweropa kunokonzera zviratidzo mushure mechikamu che 2 chewaini chakaitika mu17%).